ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - Fuzhou FMW Power Co.,Ltd. | Generator ကိုသတ်မှတ်ရန်ထုတ်လုပ်သူ
တစ်သိပ္ပံ & amp သကဲ့သို့၎င်း, နည်းပညာ oriented လုပ်ငန်း တရုတ်, Fuzhou FMW Power Co., Ltd. ။ ထုတ်လုပ်ရာတွင်သုံးသောခဲ့ပြီး တိုးတက်မှု ဒီဇယ်မီးစက် နှင့် အများဆုံးခေတ်မီ မီးစက်တစ်စုံ ထိန်းချုပ်မှု ထိုကဲ့သို့သော ATS စနစ်, စင်ပြိုင်စနစ်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်နှင့်အော်တိုအားသွင်းကိရိယာအဖြစ် system ကို 2003 ကတည်းကဒါအပေါ် Deepsea, ComAp, Smartgen module တွေနှင့်အားဖြင့် System ကို။
Fuzhou FMW Power Co., Ltd. ။ ဒီဇယ်မီးစက် Multi-စီးရီး, Multi-function ကိုအတူ featured နှင့် Multi-သတ်မှတ်ချက်ကျယ်ပြန့်ဟိုတယ်များအပါအဝင်မည်သည့်လျှောက်လွှာအားလျှောက်ထား၏, ဆေးရုံများ, အခြေစိုက်စခန်းဘူတာ, စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံများ, ဒေတာစင်တာများ, လေဆိပ်နှင့်မှ ပို. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်။ FMW Power ဒီဇယ်မီးစက်တစ်စုံ ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည် ပွင့်လင်း frame ကိုမီးစက် သို့မဟုတ် အသံတိတ်မီးစက် ဒီဇယ်အမျိုးအစားနှင့်အတူ ပါဝါမျိုးဆက်အမျိုးမျိုးသောတောင်းဆိုချက်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအင်ဂျင်နှင့်မီးစက် Alternative 3kw ကနေအကြီးအကျယ် 2000kw.It အဖုံးများအထိအထိ တတ်မီးစက်, Ricardoမီးစက်, Perkins မီးစက်, Shanghai မီးစက်, Deutz မီးစက်, Lovol မီးစက်, Kubota မီးစက် နောက် ... ပြီးတော့ မူရင်းနှင့်အတူ Stamford, Leroy Somers, မာရသွန် နှင့် Mecc-Alte ဂျင်နရေတာစက် Alternator သည် ။
Fuzhou FMW Power Co., Ltd. ။ ထုတ်လုပ်ခြင်းအခြေစိုက်စခန်းအတွေ့အကြုံရှိနှင့်အတူစွမ်းအင်သုံးဖြစ်ပါသည် အလုပျသမား, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာသမားထိပ်တန်း-တန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှု, စုဝေးများနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ISO 9001-2008 စနစ်ဖြင့်အပြည့်အဝလိုက်နာတှငျဖှဲ့စညျး။ တစ်ခုချင်းစီကို ဂျင်နရေတာစက် သာကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ် အော်တိုကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့်တင်းကြပ်စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စစ်ဆေးရေးပြီးနောက်များနှင့်စေ့စပ် ကို manual စနစ်။